Tango Pouch Isikhwama, Isikhwama Sakusihlwa - Umagazini Design
Isikhwama, Isikhwama Sakusihlwa
Isikhwama, Isikhwama Sakusihlwa I-Tango Pouch iyisikhwama esivelele esinomklamo owenziwe ngobuqili. Ingcezu yobuciko egqokekayo egqokwa wristlet-hand ikuvumela ukuba izandla zakho zikhululeke. Ngaphakathi kunesikhala esanele futhi ukwakhiwa kokuvalwa kwamazinga okugoqeka kunika ukuvulwa okulula okungalindelekile nobubanzi. Isikhwama senziwe ngesikhumba sethole elithambile lesikhumba sokutholwa ngendlela emnandi kakhulu yesibambo nokufakelwa uhlangothi olufakiwe, ngenhloso yokuqhathanisa nomzimba omkhulu owakhiwe owenziwe ngesikhumba okuthiwa ubukhazikhazi.
Igama lephrojekthi : Tango Pouch, Igama labaklami : Anne-Christin Schmitt, Igama leklayenti : Gretchen.
Idizayina yemfashini neyokuhamba
Isikhwama, Isikhwama Sakusihlwa Anne-Christin Schmitt Tango Pouch